Ciidamada Booliska Wadanka Ingiriiska oo qabqabtay Soomaali lagu eedeeyay inay qaadka ka ganacsadaan
Booliska wadanka Ingriiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen illaa iyo 7 ruux oo Soomaali ah kuwaaso ay dawladu Ingiriisku sheegtay inay qaadka ka ganacsadaan kadibna ay lacagaha ay helaan ku taageeraan dagaalyahanada Xarakadda Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalanta.
Ciidamada dambi barista wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in 7 ruux ee Soomaalida ah oo ka kooban 6 rag ah iyo qof dumar ah laga qabtay magaalada London waxaana lagu eedeeyay in lacagaha ay ka helaan qaadka ay ka ganacsadaan ay taageero ahaan u siiyaan ururo argagixiso oo
dibbadda ah sida Al-Shabab sida ay sheegeen ciidamada dambi barista wadankaasi Ingiriiska.
Howlgalkaan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada la dagaalanka waxa argagixisada loogu yero ee wadamada Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa waxaa la sheegay in shaqsiyaadka la tuhunsan yahay su’aalo weydiin ku socoto.
Sidoo muwaadiniintaan Soomaaliyeed ee dalka Ingiriisku xir xiran ayaa lagu eedeeyay inay Qaad si dhuumaalaysi ah u geyn jireen wadamada Maraykanka iyo Canada oo Qaadku mamnuuc ka yahay.
Soomaalida qurbo joogta ah ayaa xilliyadda qaar la kulma eedeymo kaga timaada hay’adaha amaanka wadamada ay ku noolyihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin in lagu tuhmo inay Al-Shabab ama Al-Qacida taageeraan. HOME